Cesc Fabregas oo ku kalsoon in kooxdiisa Chelsea ay Champions League ka saari karto Barcelona – Gool FM
Cesc Fabregas oo ku kalsoon in kooxdiisa Chelsea ay Champions League ka saari karto Barcelona
Liibaan Fantastic March 12, 2018
(London) 12 Maarso 2018 Laacibka qadka dhexe ee Chelsea ayaa soo muujiyay kalsooni ah in kooxdiisu ay Champions League ka saari karto Barcelona.
Fabregas ayaa sheegay in kooxdiisa looga baahan yahay inay samayso wax walba oo karaankeeda ah si ay arbacada u reebto Barcelona.
Xiddigii hore ee Barca ayaa intaa ku daray inuusan wax dhibaato ah ku qabin inuu ka hortago asxaabtiisii hore, maadama uu dhawr jeer ka hortagay Barcelona isaga oo xiran funaanada Arsenal markaasna uu sifiican u gutay waajibkiisa.
“Kulankii lugta hore fursado ayeey heleen, waa sax inay maamulayeen ciyaarta laakiin naguma abuurin qatar badan, anaga ayaa ka qatar badnayn waqtiyadii aan weerarnay, kulan wayn ayaan soo bandhignay, waxaanan samaynay kaliya qalad yar, kaasna kooxaha dhan ayuu ka dhacaa” ayuu u sheegay Cesc Fabregas wargayska Marca.
“Barbarihii Barcelona ma ahan natiijo xun, waa inaan Camp Nou u aadnaa inaan gool dhalino, waan awoodnaa inaan gool ka dhalino, Barcelona waa koox aad isugu dheeli tiran sidoo kale Leo Messi ayeey haystaan, laakiin nasiibkeena ayaan ku kalsoonahay”.
“Waan ka helaa ka hortagida asxaabta, taasi waxay ku siinaysaa dhiirogalin dheeri ah, dareenku marwalba waa mid wanaagsan, dareen kaas waxaan dareemay markii aan ka hortagay iyaga aniga oo xiran funaanada Arsenal, haatana sidii si lamid ah ayaan ku samaynayaa Chelsea”.
“Wax dhib ah kuma qabo inaan ka hortago kooxdaydii hore iyo asxaabtaydii hore waayo taas dhiirgalin ayaan ka helayaa, suurogal ma ahan intaas shaki laga muujiyo waayo ugu danbayn waxaan raadinayaa maslaxada kooxdeyda”.
Di Maria oo PSG u gudbiyay qorshe lagu dhabar jabinayo Real Madrid isla markaana kooxda uu ku sii joogi karo Neymar
Real Madrid oo kulan qarsoodi ah la yeelatay Aabaha dhalay Neymar (Maxaa dhex maray labada dhinac)